ओलीको सत्ता ढाल्न बामदेवलाई अगाडि सारिदै,यस्तो छ शक्तिकेन्द्रको डिजाइन ! – www.agnijwala.com
ओलीको सत्ता ढाल्न बामदेवलाई अगाडि सारिदै,यस्तो छ शक्तिकेन्द्रको डिजाइन !
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता बामदेव गौतमलार्इ विदेशी शक्तिकेन्द्रले अगाडि सारेकाे खुलासा भएकाे छ । त्यसैले हिजाे अाज वामदेव निकै सक्रिय भएर लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी ओली चारैतिरबाट आलोचित बनिरहेको बेला गौतमले आफ्नो गतिविधिलाई बढाएका हुन् । ओलीलाई धेरै विश्वास गर्न नसकेका गौतमले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग निकटता बढाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भने सिंहले धेरै निकटताको सम्बन्ध बनाएका छैनन् । निर्वाचन अगाडिसम्म ओलीसँग राम्रो सम्बन्धमा रहेका सिंह किन बदलिएका हुन् केही बताइएको छैन ।
ओलीले दुईतिहाई बहुमतको दम्भ देखाएर भारतसंग चीन कार्ड खेलेपछि कांग्रेस नेता सिंह टाढिएको भनेर विश्लेषण हुने गरेको छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।